May 2020 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Antivirus PC Software Windows Software
သေးသေးလေးနဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ Antivirus Sorftware - Smadav 2020 Rev 13.8 Pro
Maung Pauk at 8:32:00 PM 1
14.5.2020 ရက်နေ့က ထွက်ထားတဲ့ Smadav 2020 Rev 13.8 ဖြစ်ပါတယ်.. အင်ဒိုက ထုတ်တဲ့ ဒီ Smadav လေးဟာ ဖိုင်က သေးသေးလေးဆိုပေမယ့် လူကြိုက်များပြီး Virus ပေါင်းများစွာကို သိရှိဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်..
မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေလည်း အတော်အကြိုက်များတဲ့ Antivirus Software လေးဖြစ်ပါတယ်..
အထဲမှာ user name နဲ့ Key ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်..
Home Page : https://www.smadav.net/?lang=en
Download : 14.43 MB
ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာသုံး Lightroom အတွက် The Ultimate Color Bundle Presets Free
Maung Pauk at 11:03:00 AM 0
Lightroom ကို ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုနေသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးနေသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အသင့်သုံး မရှိမဖြစ် Preset ပေါင်းအုပ်စုပေါင်း (၄၀)(Desktop Preset 500, Mobile Preset 500)ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အသုံးပြုနည်းကိုလည်း လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ Video Tutorial လေးနဲ့ ပြပေးထားတာမို့ Preset ဘယ်လိုသွင်းလဲဆိုတာ အလွယ်တကူသိနိုင်မှာပါ..
Drag and drop our preset files to change the look and feel of your photos instantly.
500+ mobile presets so you can edit on your phone.
30+ of the best creators came together to create the ultimate preset pack. With over 500+ presets, there really is no reason you would want to buy presets fromasingle creator. Our intention was to get you access to the best colors at the cheapest cost.
Instant downloadable access to 500 desktop presets
Instant downloadable access to 500 mobile presets
Tutorial PDFs on how to install, download and use your preset files
Download : 284.2 MB
Maung Pauk at 9:43:00 PM 0
Maung Pauk at 11:19:00 PM 0
အိမ်တွေကို အလှပဆုံးနဲ့ ဒီဇိုင်းအမိုက်ဆုံးတွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. အပြင်ပိုင်းဒီဇိုင်းတွေသာမက အိမ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းတွေကိုပါ အကောင်းဆုံး ရေးဆွဲနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်.. အာခီ အင်ဂျင်နီယာတွေအသုံးများတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..
Crack Folder ထဲက Home Designer Pro 2021.exe ကို Copy လုပ်ပါ..
Desktop ပေါ်က Home Designer icon ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်ပါ..
ခုနက Copy ယူလာတဲ့ Home Designer Pro 2021.exe ကို Paste လုပ်ပါ..
Home Page : https://www.homedesignersoftware.com/
Download Full Version : 277.12 MB
Drivers PC Drivers Windows Software
Windows Computer တင်ထားတဲ့သူတွေမှာ ကိုယ့် Hardware တွေကိုမောင်းနှင်တဲ့ Driver ဟာ ပြည့်စုံမှန်ကန်ပြီး Update ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်.. အဲဒီအတွက် Driver တင်တဲ့ Software တွေအများကြီးထဲက ကျွန်တော်သဘောကျသုံးစွဲနေတဲ့ Driver Booster ကို လိုင်စင်ဗားရှင်း အလကားပေးနေတာတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..
Setup နဲ့ Install လုပ်ပြီး ပေးထားတဲ့ကီးကို Activate ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.. နောက်ထပ် ၃ လကျော်ကျော်လောက်ကို Pro Version အဖြစ်သုံးနိုင်ပါမယ်..
အင်တာနက်ဖွင့်၊ Software ကို run ပြီး Driver ကို Scan လုပ်.. Update ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.
Driver Booster v7.4.0.721 Download :
Mr. Win Hlaing at 10:34:00 AM 0
ပုဂံကီးဘုတ်အသစ်လာပါပြီ။ Unicode ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသောကီးဘုတ်ပါ။
ဗားရှင်းအသစ်မှာ အသံဖြင့်ပြောဆိုနိုင်သော စနစ်များ ပါဝင်လာသည်။
Unicode နားမလည်သောသူများအတွက်လည်း ဇော်ဂျီပြောင်းလည်းဖတ်နိုင်အောင် အသင့်ပါဝင်ပါသည်။
၂။ Google PlayStore တွင် ဗားရှင်းအသစ်ကိုတင်လိုက်ပါ။ ဒါမှသာလျှင် အသံဖြင့်ပြောဆိုနိုင်သော စနစ်များပါဝင်မည်။
၃။ ပုဂံကီးဘုတ်သုံးသူအနေဖြင့်လည်း Theme တွေပြောင်းချင်ရင် Payple ဖြင့်ရော ဖုန်းဘေနှင့်ပါ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်သည်။
၄။ ဝယ်ယူမှုမရှိပါက မူလပါဝင်သော Theme အနက်ရောင်ကိုသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။
၅ ။ မိမိရဲ့ ဖုန်းထဲတွင်ရှိသော ဇော်ဂျီဖောင့်များကို ယူနီကုဒ်‌ဖောင့် အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်အောင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
၆။ ပုဂံကီးဘုတ်တွင် အခုမှစ၍ အသံစနစ်ပါဝင်မှုကြောင့် အနည်းငယ် (Error) ရှိရင်
၇။ နောက်လာမည့် ဗားရှင်းအသစ်တွင် အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်အောင် ထည့်သွင်းပေးမည်ဟု ပြောထားသည်။
၈။ အသုံးပြုနည်းကိုတော့ အောက်မှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်း တစ်ပုံချင်း သေချာကြည့်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ။
၉။ Unicode အသုံးပြုခြင်းကို ဒီပေစ့်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၁၀။ စာသားများကို ကော်ပီကူးလျှင် ဇော်ဂျီယူနီပြောင်းလဲနိုင်သော ဘောက်ကလေးပါဝင်သည်။
ပုဂံကီးဘုတ်ကိုတော့ အောက်ကလင့်မှာ ဝင်ရောက်ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
Download >Download Here
Maung Pauk at 1:52:00 PM 0